UGREEN 9-in-1 USB Type C Multi-functional Adapter (Gray) CM179-40873 ~ ICT.com.mm
HomeUGREEN 9-in-1 USB Type C Multi-functional Adapter (Gray) CM179-40873
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: UGREEN Model: USB Type C Multi-functional Adapter CM179 Item No: 40873 Input: USB-C male Output: 1xHDMI port supports resolution up to 4Kx2K/30Hz 1xVGA port supports resolution up to... [Learn more]
Brand: UGREENSKU: 152116N/ASee more: Cables & Adapters, Deals, Gadgets & Accessories, Mobile Accessories, Products, Recent Updates, Shop, Star Universe, UGREEN, Under 100kFilter by: Adapters, Promotion
Model: USB Type C Multi-functional Adapter CM179
Item No: 40873
Output: 1xHDMI port supports resolution up to 4Kx2K/30Hz
1xVGA port supports resolution up to 1920 x 1080P/60Hz
3xUSB-A ports compliant with USB 3.0 specification with transfer rates up to 5Gbps, backward compatible with USB2.0/ 1.1
1×10/ 100/ 1000 Ethernet port
Supports Micro SD (TF)/ SD/ MMC Card
Supports simultaneously read and write on two cards
HDMI and VGA be used simultaneously
Dimensions: L123 x W52 x H19 mm
USB Type-C အသုံးပြု MacBook နဲ့ Windows Laptop ပိုင်ရှင်တွေအတွက် USB Type-C နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ HDMI, VGA, Ethernet, USB 3.0 နဲ့ SD Card Reader တို့အပြင်
Type-C PD 3.0 အားသွင်းပေါက်လည်း ပါဝင်တဲ့ ဘက်စုံသုံး Type-C Multifunctional Adapter လေးဖြစ်ပါတယ်။ Adapter ရဲ့ HDMI port က 4K UHD (3840×2160@30Hz) ရုပ်ထွက်အထိ
ရရှိမှာဖြစ်ပြီး VGA ပေါက်ကတော့ Full HD (1920×1080@60Hz) ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ HDMI နဲ့ VGA ပေါက် နှစ်ခုလုံးက တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ RJ45 Ethernet Port ကအင်တာနက်အမြန်နှုန်း 10/100/1000Mbps အထိရရှိတာကြောင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ ဂိမ်းကစားတာနဲ့ဒေတာ Upload/Download ပြုလုပ်တာတွေကို အဆင်ပြေ မြန်ဆန်စေမှာပါ။ဒေတာကူးပြောင်းမှုအမြန်နှုန်း5Gb/s အထိရှိတဲ့ USB 3.0 Ports (၃)ခုအထိ ပါဝင်သလို Micro SD နဲ့ပုံမှန် SD Card နှစ်မျိုးလုံးအတွက် Card Reader ပေါက် နှစ်ခုပါဝင်ပြီးတပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Type-C PD 3.0 အားသွင်းပေါက်က PD အားသွင်းနည်းပညာပါဝင်တဲ့ MacBook အသစ်တွေနဲ့ Windows Laptop တွေကိုအလျင်အမြန်အားသွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အာမခံတစ်နှစ်ပါဝင်တာကြောင့် အရည်အသွေးပိုင်းလည်းစိတ်ချရပြီး အသုံးတည့်လှတဲ့ ဒီ UGREEN အမှတ်တံဆိပ် စွယ်စုံသုံး Type-C Adapter လေးကိုအိမ်တိုင်ယာရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ အိုင်စီတီမှာတဆင့်ဝင်ရောက်လေ့လာမှာယူနိုင်ပါတယ်ဗျ။
Expand your MacBook with HDMI, VGA, Ethernet,3ports USB 3.0, TF SD card reader and one type C PD 3.0 charging port.
Support faster data transfer up to 5Gbps, 10X faster than USB 2.0. Type C card reader easily expands SD and TF slots to your PC.2cards reading simultaneously keep you away from the hassle of constant unplugging and re-plugging.
Total price:K132,567 K79,541
This item: UGREEN 9-in-1 USB Type C Multi-functional Adapter (Gray) CM179-40873 K73,000 K43,800